Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamo uu gumaysiga u soo ururiyay rogaalcelin oo cagta la mariyay
Ciidamo uu gumaysiga u soo ururiyay rogaalcelin oo cagta la mariyay
Wararka aan ka helnay Xarunta dhexee jabhadda ayaa waxay sheegeen in taariikhada marakay ahayd 26- 30/08/11 ciidamo laga soo ururiyay meela kala duwan ay ka soo baxeen, Jigjiga, dh/Buur iyo Baabili iyaga oo kaga jawaabaya dagaaladii khasaaraha weyn lagu gaadhsiiyey ciidankii waday Chinese-ka ee Woyaanaha ahaa.
Warbixinadii ay na siiyeen xarunta waxaa kaloo ka mid ahaa inay isku haleeleen CWXO iyo ciidamada cadawga goobo kala duwan oy ka mid yihiin, Birjeex, Dargaamo iyo Ceel Weyne, Galaalsho oo 3ex dagaal uu ka dhacay iyo Faafin.
Waxaa iyadana shalay oo ahayd maaintii ciidul fidriga (Soonfureed) uu ka bilowday dagaal culus oo ilaa maanta socday Buuralayda Dargaamo, oo ku aadan woqooyiga Dhanaan. Dagaaladaa oo dhexmaray CWXO iyo ciidan Woyaane ah ayaa khasaare culus loogu gaystay Cadawga, iyaga oo askar badanoo uu ku jiro sarkaalkii watay lagu dilay goobtaas.
Dadkii magaalada oon wax ka weydiinay waxay noo sheegeen in aad loo soo eryay askartii cadawga iyaga oo la soo baqday dhaawac farobadan.
Dhanka kale waxa dagaal culus uu ka dhacay Karinka Soolle oo u dhexeeya Dhagaxbuur iyo Dhagaxmodaw, kabtaas oo kolonyo cadaw ah lagu heley wadada u dhexeysa labada magaalo waxaana firxadkii cadawga uu ku soo noqday Dhagaxmadaw oo kolkii horeba ay ka soo baxeen.
Wararkan hordhaca ah waxaa naloogu sheegay in aad loogu wax yeeleeyey cadawga, waxayna noo sheegeen in dagaalka Dargaamo uu ku bakhtiyey Sargaalkii ciidankaas watay.
maansha allaah aad ayaan ugu farxay warkan aad soo galisen soo tabiya wararkii ugu dambeyey ee wadanka ogadenya waadna mahadsantihiin